Ingozi Yokuqudulelana - Ayanda Msweli - Road Safety Ambassador
Ukuqudulelana kuwumphumela wokungahoshelani ngokwemimoya. Lapha sizogxila ekuquduleni kwabasebudlelwaneni behamba ngemoto eyodwa. Uma nihamba ngemoto ningezweni kuba umqansa ongakhwelwa mbongolo kulona oshayelayo ngoba kumele amehlo akhe adlule esitheni sakhe ekuyobhekeni lesisibuko esingaphesheya kwesokunxele, kanye naso lesi esiphakathi nendawo siyakwenza ukuthi uzithole usubona isitha sakho ngendlela engahlelekile.
Umsebenzi wezibuko emotweni ubaluleke ngendlela efanayo. Ngenxa yamandla engxabano kuyenzeka oshayelayo agcine ekhethe ukungazisebenzisi zonke kanti ilapho esezigxoba khona ngetshe esithweni esifihlekile. Ngokungazisebenzisa zonke izibuko nibekeka engozini yokuthi ningangenwa imoto esandleni sobunxele ningaboni noma ningenwe imoto ngemuva ningayibonanga.
Okunye okudala ingozi ngokushayela uqudule, ungazithola usuhamba ngesivinini esiphezulu kakhulu kodwa ungaboni ngoba isimomqondo sakho asikho kulento oyenzayo, kokunye ungazithola usushayela ngesivinini esiphansi kakhulu kunalesi esivumelekile bese kudaleka ingozi yokuqudula.
Kubalulekile ukuthi ngaphambi kohambo lwenu ngemoto nibambe isimo senhlambuluko ningangeni emotweni nesimo samafindo nezihibe. Kuyenzeka umshayeli angayiboni ingozi kodwa ibonwe umgibeli, uma ningezwene uzokuxwayisa kanjani? Kubalulekile kakhulu ukuthi ningangeni emotweni nenhliziyo enehhuka ukuze niphile isikhathi eside njengemali kangoqo. Mkhulumise umuntu ohamba naye.